Azeb Mesfin, oo Soo jiidasho Siyaasadeed Yeelan Wayday – Rasaasa News
Azeb Mesfin, oo Soo jiidasho Siyaasadeed Yeelan Wayday
Jun 29, 2014 Azeb Mesfin, oo Yeelan Wayday Soo jiidasho
Jijiga, June 29, 2014 – Azeb Mesfin oo doorkii ay ku lahayd siyaasada TPLF ay sii shiiqayso tan iyo intii uu dhintay saygeedii Raysal-wasare Meles Zenawi. Azeb Mesfin, waxay dhawaan ka tanaasuli doontaa qaar ka mida xilalkii siyaasadda ee ay dawlada ka haysay.
Waxaa jira warar soo baxayey baryahan oo sheegayay, in haweenayda uu ka dhintay Meles Zenawi, ay ka sii fogaanayso doorkii ay ku lahayd Jabhada Xoraynta Dadka Tigray [TPLF], oo ah laf dhabarta EPRDF.
Waxaa cadaan ah in garabkii siyaasadeed ee ay wada hogaamin jireen iyada iyo Simon Bereket uu daaqada ka baxay iyo in Azeb Mesfin ay rumayn kari wayday riyadeedii ahayd qabashada xilka duqa magaalada Addis Ababa.
Sida uu qoray wargayska Indian Ocean. Mar dhaw, waxay waydiisatay in ay ka nasato doorkii shaqo ee ay ku lahayd hogaaminta TPLF, taas oo ninkeedu u magacaabay. Waxayna hada ka fiirsanaysaa in ay iska casisho gabi ahaanba xisbiga, si ay wakhti ugu hesho dhaqaajinta Meles Zenawi Foundation. Hadii ay sidaas samayso, kuma khasabana in ay cadayso hantideeda, laakiin hogaamiyeyaasha ugu muhiimsan TPLF way ku khasbi karaan in ay sheegto hantideeda.
Azeb Mesfin, waxaa kale oo ay joojin shaaqadii ku xigeenimo iyo doorkii ay ku lahayd shirkadaha sida dhaw ula shaqeeya TPLF.
Cudduda Dhalinyrada Cusub ee Ogaden oo Balan Qaaday in Uuna Hankaagayn Halganka Gobonimodoonka Ogadeeniya.